Macluumaad kala duwan oo ku saabsan ragga | Ragga leh Qaabka (Bogga 2)
Sida loo doorto suudhka arooska ee buluuga ah
Haddii aad raadinayso suudh buluug ah oo aroos ah oo loogu talagalay arooskaaga ama dhacdo gaar ah, maqaalkan waxaan ku tusi doonaa dhammaan fursadaha suuqa
Dharka ragga ugu fiican dhamaadka sanadka
Hadii ay maalmo koobani ka hadhsan yihiin dhamaadka sanadka oo aanad wali garan waxa aad xidhato dabaaldaga dhamaadka sanadka,...
Kuwani waa noocyada dharka raaxada ee ugu fiican kuwaas oo naga caawin doona in aan labbisno haddii aan lacag ku filan ku haysanno boorsadayada.
Haddii aad rabto inaad xaqiijiso haddii lammaanahaagu uu yahay mid aan daacad ahayn, waxaad ka takhalusi kartaa shakiyada talooyinkan
Sida Looga Dhigo Gabadha Jacaylka WhatsApp
Waxaan ku siinaynaa tabaha ugu fiican iyo tabaha si aad u ogaato sida loo sameeyo in gabadhu ku dhacdo jacaylka WhatsApp. Dabeecaddaada iyo dhexdhexaadnimadaada ayaa la yaabi doona isaga.
Bishii Nofembar ee qeybtiisa labaad, waxaan bilownay inaan ka fikirno fasaxyada kirismaska ​​​​iyo waxa aan u soconno ...
WhatsApp wuxuu noqday mid ka mid ah shabakadaha aadka loo isticmaalo waxayna nasiisay mudnaanta aan awoodno ...
Caymiska caafimaadka ee dhalinyarada wuxuu ku kacayaa kala bar dadka waayeelka ah
Qiimaha caymiska caafimaadku wuxuu isbedelaa da'da. Waa maxay sababta iyo sababta qofka waayeelka ahi u bixin karo labanlaab?
Waxaan samaynaa ururinta yar ee buugaagta ugu daahsan ee ku saabsan isku-kalsoonaanta iyo hagaajinta, si ay kaaga caawiso hagitaanka hagaajintaada shaqsiyeed.
Saacadaha ugu wanaagsan ee caqliga badan
Waxaan kuu soo bandhignay liis yar oo xulasho ah oo ah saacadaha smart -ka ugu fiican si ay noloshaada uga dhigaan kuwo aad u fudud.
Pibonexia waa eray la allifay si loogu qoondeeyo shakhsiyadda dadkaas is jecel illaa heerkeeda ugu sarreeya.
Haddii aad jeceshahay inaad sawir qaadatid, waa kuwan xeeladaha ugu fiican ee lagu ogaanayo waxa ugu habboon ee sawirro looga qaado.
Tilmaamaha lagu baranayo lamaanahaaga iyo hagaajinta xiriirka dhow
Waa inaad taqaanaa lammaanahaaga si aad u noqoto qof saaxiib ah. Waa xiriir ixtiraam iyo ogolaansho. Ogow !!
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa tabaha iyo sirta ugufiican ee aad kubaraneyso sida loo sameysto saaxiibo iyo saameyn dadka.
Ma jeceshahay mootooyinka oo ma ku raaxeysataa teknoolojiyada cusub? Soo ogow dhammaan wararka teknolojiyada ugu dambeeya ee qalabka mootooyinka.
Barnaamijyada shukaansi ugu fiican
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato barnaamijyada shukaansiga ugu fiican. Baro qalabka aad dadka kula kulanto.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay tahay inaad ogaato oo aad sameyso si aad ula tashato tigidhka taraafikada. Halkan ka baro dhammaan xulashooyinka suurtogalka ah.
Haddii ay tahay inaan ka hadalno Dharka magaalooyinka, waa inaan ka hadalno isbeddelladaas labbiska qaab caadi ah ama aan rasmi ahayn, laakiin ka sarreeya dhammaan magaalooyinka.
Wax ka siinta lugaha ninka
Waxaan ku siineynaa talo ku saabsan sida ugu fiican looga saari karo timaha lugaha ragga, si aad u doorato midka ugu habboon baahidaada iyo natiijooyinkaaga
Ninkee uma baahna hadiyado si uu u sahamiyo waxyaabaha cusub? Halkan waxaad kuheli doontaa soo jeedimaha ugu wanaagsan ee fasaxaaga.
Qaybteena hadiyadaha ragga waxaan ku leenahay xul kuwa ka mid noqon kara kuwa horey u soo guursaday.
Sida loo doorto laptop
Laptop wuxuu ku siinayaa ismaamul awood u leh inaad isku qalabeyso inta aad rabto. Eeg sida loo doorto midka kuugu fiican.
Maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca
Waxaan kuu sheegeynaa qaar ka mid ah fikradaha iyo talooyinka aad ku ogaan karto waxa la sameynayo dhammaadka usbuuca. Isku day inaad ka faa'iideysato waqtigaaga oo aad ku raaxeysato.
12 qorshe oo loogu talagalay lammaanaha da'da yar
Qorshayaasha u dhexeeya lamaanayaasha dhallintayar, waxaan kuu soo jeedineynaa madadaalo iyo fikradaha ugu fiican ee jaceylka ah si aad u hesho daqiiqado fiican.
Mucaaradnimada Xafiiska Boosta, shaqo deggan iyo waqti firaaqo ah
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wacitaanka 2020-2021 ee Mucaaradka Post. Dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ku ogaato halkan
Ragga leh Style-ka waxaan kuu soo qaadaneynaa liiska gawaarida ugu fiican ee lagu qiimeeyay sanadkan 2020 si aan kuu siino raaxada muuqaalka adduunka gawaarida.
Qunsuliyadaha 'Retro consoles' ayaa wali caan ah oo moodada ah. Waxaan kuu soo bandhigeynaa liis yar oo ka mid ah kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu iibinta badan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee boorsooyinka iyo adeegsiga la siin karo.
Maxay u egtahay guusha dumarka ugu badan sanadka 2020?
Maqaalkan waxaan uga hadli doonnaa muuqaalka ragga oo hadda ku guuleysta dumarka, laakiin sidoo kale waxaan ku siin doonnaa talooyin ...
Buugaagta la akhriyo deyrta
Buugagtaan waxaa loo doortay si xilligan dayrta aad u dooran karto hal ama in ka badan oo buugag ah akhriskooda u dhigma.
Ragga waxay rabaan hadiyado shaqsiyeed jikada, sidoo kale
Taariikhaha kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaya waana waqtigii aad isku kululeyso madaxaaga si aad uga yaabiso qoyska iyo asxaabta si la yaab leh in ...
Soo ogow waxa codsiyada kubbadda ay ka jiraan suuqa si aad u aragto cayaaraha ugu fiican oo toos ah oo tayo leh.
Soo ogow sida xog-warrannada ay ugu xuubsiibteen taariikhda iyo nooca qaababka iyo moodooyinka ka jira suuqa.
Iyagu waa jilayaal matalayay aflaamta waaweyn isla markaana mowduuc muhiim ah leh, iyagoo ah khubaro waaweyn, jilayaal waaweyn oo ku saabsan fanka dagaalka.
Baro waxa ugu fiican ee tilmaamaha iyo waxqabadyada si aad u hesho nolol wanaagsan oo habeennimo. Halkan waxaan kuugu sharxeynaa wax walba.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sida loo dhaqo gaarigaaga si aad ugu ekaato bilaa camal. Waxbadan ka baro halkan.
Halkan waxaan ku tusaynaa talooyinka ugu fiican iyo meelaha loo safro kaligaa. Baro inaad ku raaxeysato naftaada iyo adduunka.
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida loo aqoonsado asxaabta sunta leh isla markaana loo arko sida loo xaliyo dhibaatooyinka.
Waxay yihiin jilayaal qurux badan, soo jiidasho iyo qurux badan, dhammaantoodna leh xirfad qurux badan oo ay kaga dhex muuqdaan Isbaanishka iyo silsiladaha shisheeye iyo filimada.
Sida loo noqdo aabe wanaagsan
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan dhinacyada iyo tilmaamaha lagu barto sida loo noqdo aabbe wanaagsan. Waxbadan ka baro halkan.
Sida loogu noolaado sifiican
Qormadan waxaannu kuugu sheegaynaa tabaha ugu waxtar badan ee lagu barto sida ugu wanaagsan ee loogu noolaado. Ogow waxa khaladaadkaagu yahay iyo sida aad naftaada u caawin karto.
Sida loo doorto kombiyuutarka kumbuyuutarka
Haddii aad rabto inaad doorato kumbuyuutar kumbuyuutar ah, waxaad ogtahay inay jiraan noocyo badan oo suuqyo ah oo suuqa yaalla ...
Qormadan waxaan ku soo koobaynaa tilmaamaha ugu fiican ee lagu barto sida loo galo gabadha loona guuleysto. Wax walba halkan ka ogow.
Fayraska corona wuxuu nagu qasbay inaan guriga joogno in ka badan 50 maalmood. Halkan ka baro caadooyinka ugu badan ee dadka lagu xidho.
Soo ogow noocyada kala duwan ee aaladaha casriga ah ee casriga ah ee caawiya aasaasida raaxada weyn ee gurigeenna oo noloshaada u fududeysa.
U adeegsiga shabakadaha bulshada si nabadgelyo leh, iyadoon wax dhibaato ah oo nafsaani ah keenin, waa wax maanta ka welwelsan bulshadeenna waana inaan xaddidnaa
Waxaan kuu sharxeynaa waxa sharciyada kubada cagta ugu muhiimsan ay yihiin iyo sida loo adeegsado si aysan u jirin qaladaad ciyaar. Waxbadan ka baro halkan.
Miyaad ku fikireysaa inaad iibsato moobil cusub oo aadan garanayn midka? Halkan waxaan kuugu sheegeynaa sida loo doorto taleefanka gacanta si uu kugu habboonaado.
Ernie Davis wuxuu ahaa shaqsiyad aad uwanaagsan xirfaddiisa xirfadeed ee weyn noloshiisa isagoo ah laacib Mareykan ah qeybta ...
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee buuraha waa cunsur lagama maarmaan u ah in indhaha laga ilaaliyo waxyaabaha xun xun. Baro inaad doorato kuwa ugu fiican.
Sida loo dheeho gadhkaaga
Dheehinta gadhka waa xaqiiqo la soo dhaqmayay sanado badan oo si isa soo taraysa looga dhaqan gelinayo bulshooyinka oo dhan. Raadi sida loo sameeyo.
Khatarta kale ee cudurkan faafa ayaa ah inaad kudhowaad tahay "mamnuuc" inaad jirrooto. Sababta ayaa ah in cisbitaalo badan ...
Cudurka faafa ee SARS-CoV-2 ayaa gaarey dalal badankood. Qaarkood waxay burburinaysaa xitaa xasuuq ka sii badan ...
SARS-CoV-2 waxay ku qasabtay in lagu soo rogo xadhig si looga fogaado kororka qalooca faafa. Kuwa ku nool ...
Haddii aad raadineyso habab iyo macne aad ku qancin karto qofkaas, bogaadin quruxsan ayaa beddel fiican u ah xod-xodashada. Halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa xulasho wanaagsan.
Waxaad la kulantay naag aad runtii jeceshahay oo aanad ogayn inay aargudasho iyo in kale. Ragga leh Qaabka waxaan kuu sheegeynaa waxa ay tilmaamahoodu noqon karaan.
Cashadu waa qeyb ka mid ah cunnooyinkayaga iyo qaadashada cuntada maalinlaha ah, waxaan u soo jeedineynaa casho si loo dhimo miisaanka oo loogu sameeyo si fudud oo caafimaad leh.
Baro inaad ku aqoonsato asxaabta beenta ah ee ka dhex muuqda noloshaada tilmaamahan. Qodobkaan waxaad ka heli doontaa wax walba oo ku saabsan.
Jefferson Pérez waa tusaale qof weyn iyo horumar. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah garsoorayaashii ugu waaweynaa iyo ciyaartoydii ugu fiicneyd edbinta.
Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah dhinacyada ay tahay inaad tixgeliso si aad u dooratid sicirka ugu wanaagsan ee mobilada adiga kugu habboon. Halkan gal si aad waxbadan u ogaato.
Raadi wax kasta oo ku saabsan Jet Lag, laga bilaabo sababaha iyo astaamaha illaa xeelado wax ku ool ah oo lagu jilciyo jug-darrada cilladan.
Qoraalkan waxaan kusoo bandhigeynaa sida loo isticmaalo kareemka dhiig-baxa. Baro sida loo isticmaalo kareemkan oo aad uga faa'iideysato faa'iidooyinkiisa timo-saarista.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha loogu talagalay ragga si ay kaaga caawiyaan hanuuninta waxa aad rabto inaad doorato.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican ciyaaraha waayeelka. Waxaan kugula talineynaa ciyaaro aad u xiiso badan oo leh faa'iidooyin wanaagsan.
Soo ogow cunnooyinka ugufiican si aad hoos ugu dhigto kolestaroolka una sameyso cunto kaladuwan oo caafimaad leh. Waxaan sidoo kale kuu sheegeynaa cuntooyinka ay tahay inaad xadido.
Sida loogu safro Mareykanka
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad tixgeliso si aad u abaabusho safarka Mareykanka. Halkan ka baro.
Soo ogow faa'iidooyinka biirka, cabitaan leh kumanaan sano oo taariikh ah oo lala xiriiriyay faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan.
Baro inaad hagaajiso adkeysigaaga jimicsiga adoo si faahfaahsan u ogaanaya sida ay u shaqeyso iyo maxay yihiin jimicsiyada kuugu fiican.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waa kuwan laylisyada ugufiican ee miisaanka lumin kara. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato dhinacyada ay tahay inaad tixgeliso.
Maqaalkani waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo mojito tayo fiican leh. Baro sida looga sameeyo is biirsaday inuu noqdo nolosha dhinacyada.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa faa iidooyinka ugu waaweyn ee dabaasha iyo ujeedooyinka uu cayaarahaani hiigsanayo. Ha moogaan!
Clenbuterol waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo xajmiga murqaha iyo dufanka gubta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira saameyn caafimaad oo badan. Halkan ku baro iyaga.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa talooyinka iyo tabaha ugu fiican ee ku saabsan sida ugu fiican ee loogu ekaado sawirrada. Baro in loo xagliyo oo waqti xun ha helin.
Biirku miyuu kaa dhigaa mid buuran?
Miyaad u maleyneysaa in biirka uu kaa dhigo mid buuran? Halkan gal oo baro wax walba oo ku saabsan khuraafaadka iyo xaqiiqda ku saabsan mowduucan. Wax walba waan kuu sharxeynaa.
Qodobkaan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u ogaato sida loo noqdo tusaale. Halkan gal oo wax walba ka ogow.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hoverboards
Hoverboards waxay isbeddel ku sameeyeen dhaqdhaqaaqa adduunka intiisa badan. Baro sida ay u shaqeyso iyo waxyaabaha ku jira halkan.
Ragga ugu quruxda badan adduunka
Raadi kuwa ugu quruxda badan adduunka. Ma rabtaa inaad ogaato sababta loo xushay? Miyaad midkoodna u eg tahay? Halkan gal.
Qurxinta Halloween ee ragga
Raadi qurxinta ugu wanaagsan ee Halloween ee ragga, laga bilaabo zombies-ka caadiga ah illaa Jigsaw qalooca, illaa White Walkers.
Waxaan soo bandhigeynaa saacadaha ugu wanaagsan ee isboortiga, qalab muhiim u ah jimicsiga sidaas darteedna waxaan ku falanqeyneynaa horumarkaaga. Maxay yihiin moodooyinka ugu fiican?
Maxaa la siiyaa nin? Haddii aad ubaahantahay dhiirigelin, halkan waxaad kaheli doontaa fikrado badan oo laxiriira tikniyoolajiyadda, moodada, guriga iyo waxbadan!
Maxay yihiin kiniinnada ugu fiican?
Soo ogow noocyada ugu caansan ee kiniiniga ah ee 2022 si aad ugu saxnaato iibsashada qalabkan shaqo ama waqtiga firaaqada ee guriga. Maxay yihiin noocyada ugu fiican?
Falanqaynta buluugga buluugga ah iyo midka cad ee hoosta laga gashado oo ka socda shirkadda 'Shakers', oo ah shirkad ku takhasustay dharka noocan ah.
Jinsiyadaha ugu fiican
Qasab ma aha isku mid. Waxay ku kala duwan yihiin hababka wax soo saarkooda, gaar ahaan geedaha iyo miraha ka samaysan iyo waqtiga. Maxay yihiin 11ka gins ee ugu fiican? Dhamaantood ma tijaabisay?
Raadi wax walba oo ku saabsan mojito. Waxyaabaha ay ka kooban tahay, sida loo karinayo, qoraalada, kala duwanaanshaha iyo tabaha loo diyaariyo is biirsada macaan ee guriga. Ma rabtaa inaad barato sida loo sameeyo mojito si fudud oo dhaqso ah? Halkan waxaan kuu sheegeynaa.
Hadiyadaha ugu fiican maalinta aabbaha
Baro hadiyadaha ugufiican Maalinta Aabbaha 2022. Daryeelka shaqsiyeed, moodada, dhaqanka iyo walxaha cuntada ee aad kaheli karto hadiyada ugufiican.
Tixraacyadii Isbaanishka ee ugu quruxda badnaa uguna mudnaa
La kulan qaar ka mid ah taxanaha ugu fiican Isbaanishka. Xullo khiyaali ah oo telefishinka Isbaanishka weyn oo ay ka mid yihiin riwaayado, majaajillo, riwaayad iyo ficil.
Markuu dembigu culus yahay, waxay u horseedi kartaa dambi iyo ciqaab ciqaabeed. Hadda, waa maxay ganaaxyada ugu badan?
Moodooyin isku dhafan ayaa cadaadis saaraya ninka qarniga XNUMXaad. Miyaad dhageysaneysaa fikirka ku saleysan jinsiga? Ka waran doorarka cusub ee ka imanaya dumarnimada iyo sheegashadeeda?
Dhididka khafiifka ah ee caadiga ah ayaa ah aasaaska aad u baahan tahay gugan. Soo hel fikradaha muuqaalka oo muujinaya kala duwanaansho weyn iyo qaab.
Waa maxay muusikada aad jeceshahay inaad ku ciyaarto
Haddii jawaabta su'aasha hore ay tahay inaad jeceshahay qoob-ka-ciyaarka, waxaad ku raaxeysaneysaa mid ka mid ah raaxooyinka waaweyn ee nolosha. Qoob-ka-ciyaarka, kaligaa, laba-labo ama koox-koox, waxaa jira laxanka dhadhanka oo dhan.
Ciidaha ciida ee Spain
Ciidaha Easter-ka ayaa ah fursad ay maalmo kula qaadan karaan qoyska. Taariikh dad badani ka faa'iideystaan ​​si ay u xaqiijiyaan caqiidadooda Katooliga ah.
Waxaan soo jeedineynaa shan taxane oo cusub si aan u daawano jiilaalka. Xul xul ah oo ku saabsan noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan riwaayado, majaajillo, iyo sheekooyin saynis.
Si looga fogaado dhibaatooyinka iyo lama filaanka xun, oo waliba qaali noqon kara, waa inaad marwalba feejignaataa daryeelka gaarigaaga xilliga qaboobaha.
Bandhigga filimka ayaa la filayaa sannadkan
Waxaa lagama maarmaan u ah kuwa ku raaxeysanaya shineemooyinka wanaagsan, inay ka warqabaan taariikhaha ay filimada ugu badan ee filimku ay filayaan ay ku dhufan doonaan xafiiska sanduuqa.
Wax walba waxay ahaayeen codsiyo loogu talagalay sanadka cusub illaa sanadka cusub oo dhan, dhalanteed, rajo, iwm. Laakiin, miyay runti jiraan rajo ah in la fulin doono?
Waxaan kuu sheegeynaa furayaasha inaad si sax ah isugu darto xarig shaati iyo suud ah. Ha ku khaldamin inaad isticmaasho isku dhafka qaldan ee tilmaamahan
Khamri noocee ah ayaad u keentaa casho haddii lagu casuumo?
Miyaa lagugu casuumay inaad wax ka cuntid guriga saaxiib oo aadan rabin inaad faro madhan la timaado? Marka waxaad isweydiin kartaa naftaada: khamri noocee ah inaad keento?
Shan qaybood si ay ugu duubtaan Logomania sanadka 2018
Logomania waa mid ka mid ah isbeddellada sii wadi doona inay xaaqdo sanadka 2018. Waxaan soo jeedineynaa shan qaybood si aan ugu qaabilno qaab.
Habeen dhaxan lagu seexdo ayaa waxyeello weyn u geysan kara gaarigaaga. Ka ilaalinta gaarigaaga dhaxanta waa inay mudnaan siisaa mudnaantiisa.
Sidee loo sasabaa haweeney la qabo?
Soo ogow dhammaan sirta si aad u ogaato sida loo sasabo haweeney xaas leh oo aad u ogaato sida loo fasiro calaamadahaas si aad u ogaato haddii haweeney go'an ay ku jeceshahay. Hubi 100% guul leh.
Qurxinta Kirismaska, geed ama dhalashada goobta?
Mid ka mid ah xilliyadii ugu xiisaha badnaa ee sannadka ayaa timid oo ay la socoto qurxinta Kirismaska ​​oo naga wada dhigaysa inaan dhammaanteen ku faraxno.
Ikhtiyaariyada lagu aadayo fasaxa Kirismaska
Qof walba aayatiin ka duwan ayuu maanka ku hayaa. Marka xigta, waxaan arki doonaa fursado kala duwan oo aan fasax ugu aadi karno Kirismaska.
Sidee loo gartaa haweeney jiifta?
Khiyaamada lagu garto haweeneyda markay jiifto ama aan u maleyno inaysan runta noo sheegin. Haddii aad u maleynaysid inay saaxiibadaa beenta kuu sheegayso, waxaan kaa caawinaynaa inaad soo ogaatid dumarka beenta sheegaya
Shaqada iyo iskuulka fasaxa kirismaska, sida la iskugu daro
Fasaxa Kirismaska ​​ee dugsiga ayaa ka mid ah xilliyada la filayo carruurta. Sidee laysugu waafajin karaa shaqada iyo nolosha qoyska?
Markii aan ku jirno bangigayaga si aan u sameyno kaarka lacag bixinta, su'aasha ayaa soo baxaysa: debit ama amaah. Ikhtiyaarkee ayaan aad u xiiseyneynaa?
Markaad diyaarinayso menus-ka Kirismaska, had iyo jeer muhiim maahan inaad lacag badan kubixiso. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Sida loo abaabulo ajandahaaga kirismaska
Inaad yeelato abaabul wanaagsan oo hawlahaaga ah ayaa kuu fududeyn kara noloshaada.Taariikhdaas ajandaha Kirismaska ​​ayaa noqon kara saaxiibkaaga ugu fiican.
Sida loo dhaqmo marka hadiyad la soo gudboonaato
Kirismaska ​​ayaa soo socda liisaska hadiyaduhuna waa diyaar. Sidee loola dhaqmaa marka hadiyad la soo derso? Kawaran haddii ay tahay wax aynaan jeclayn?
Bilowga dukaamaysigaaga kirismaska
Waqtiga kirismaska ​​ayaa yimid, waqtiga wax iibsiga. Si looga fogaado kharash garaynta wax ka badan intii loo baahnaa, waa fikrad fiican inaad qorsheyso dukaamaysigaaga kirismaska.
Marka Kirismaska ​​ee soo socdaa la gaaro, waqtiga isu imaatinka qoyska, madadaalo iyo hadiyadeyn ayaa la bilaabayaa. Maxaad dooran kartaa inaad ku siiso hadiyad ahaan?
Taleefanka gacanta ugu fiican sanadkan 2017
Soo-saareyaashu waxay ku darayeen dhammaan noocyada hal-abuurnimada teknolojiyadda moodelladooda casriga ah. Waa maxay taleefanka gacanta ugu fiican?
Fikradaha lagu abaabulo cashada shirkaddaada Kirismaskan
Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaya casho shirkadeedna waxay bilaabaysaa in la qorsheeyo. In kasta oo ay umuuqato wax iska caadi ah, taariikh ...
Ma jeceshahay inaad korsato eey weyn?
Haysashada xayawaanku ma laha qalab caruusad, xitaa way ka sii yaraanaysaa haddii ay eey weyn tahay. Waxay ubaahantahay daryeel iyo baahiyo, oo laxiriira cunnadeeda.
Tilmaamaha lagu galayo qandaraaska iibka
Haddii aad samaynaysid qandaraas iib ah oo aad ku iibinayso ama ku iibsanayso baabuur ama guri, waa inaad taxaddar yeelataa. Halkan waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah tilmaamaha.
Talooyin ku saabsan doorashada la-talinta ganacsigaaga
Abuuritaanka ganacsi iyo ka soo bilowda xoqida markasta ma sahlana. Bogag badan oo loogu talagalay ganacsiga, ayaa keena xaalad aan had iyo jeer dhab ahayn.
Waxyaabaha maskaxda lagu hayo marka aad iibsaneyso gurigaaga ugu horeeya
Iibsashada gurigaaga ugu horeeya waa daqiiqad aad muhiim ugu ah nolosha dadka. Waa marxalad ina siinaysa madax-bannaanida, nabadgelyada, barwaaqada.
Xayawaan badan oo xayawaan ah ayaa aad uga baqa xayawaanka xoolaha, cabsi-qabsiga oo dhibaato keeni kara. Sidee loo xaliyaa xaaladan?
Calaamadee, qaabkee, sidee ayey u tahay qaababka tumanku? Halkan waxaad ku arki doontaa furayaasha lagu xusho giraangiraha gaarigaaga.
Qaar ka mid ah filimada naxdinta leh si loo daawado Halloween
Imaatinka Halloween, waxaa jira filimo u adeega madadaalo iyo cabsi gelin, si isku mid ah. Habeenkii ugu naxdinta badnaa sannadka ayaa soo socda.
Qaybta aasaasiga ah ee wax kasta oo ku xeeran nabadgelyada gaarigaaga waa xaaladda taayirradiisa. Goorma ayaa la beddelayaa giraangiraha?
Miyaad ka walwalsan tahay in ilmahaagu aanu lahayn caado waxbarasho?
Marxaladaha ugu adag ee cunugaada waxaa ka mid ah helitaanka caado wanaagsan oo waxbarasho. Sidee lagu gaaraa, tilmaam noocee ah ayaa la raacayaa?
Xagee looga sameeyaa marinkaaga Isbaanishka Buundada Dastuurka?
Buundada dastuurka ayaa soo socota. Waana waqtigii la qorsheyn lahaa. Dhab ahaan, waxay horey u noqon kartaa xoogaa daahitaan iyadoo kuxiran waxa waxyaabaha, boos celinta ama meelaha loogu talagalay.
Nidaamka kululaynta ee gurigaaga
Nidaamka kuleylka ee hufan ayaa ku siin doona suurtagalnimada inaad kaydiso oo aad yareyso biilasha tamarta. Waa inaad tixgelisaa xulashooyinka kala duwan.
Haddii aad ka fikireyso inaad ku rakibto qalabka digniinta guriga, waxaa jira tilmaamo la raacayo. Waxay ku saabsan tahay…
Muhiimadda tababbarku u leeyahay xirfaddaada xirfadeed
Wax kasta oo ay tahay qaybtaada waxqabad ama xirfad, tababar joogto ah ayaa ah habka kaa caawinaya inaad had iyo jeer la socoto
Filimadii caadiga ahaa ee ay ahayd inaad ogaato
Haddii aad tixgeliso naftaada filim buff, waxaa jira filimo caadi ah oo ay tahay inaad ogaato. Ma taqaan cinwaanadan, ma aragtay filimaan?
Hawlaha firaaqada ee reer miyiga
Si loo nasto, loo baashaalo oo looga baxsado waxyaabaha caadiga ah, waxaa jira hawlo badan oo reer miyi ah oo la sameeyo. Waxay yihiin nashaadaad iyo madadaalo xilliyada firaaqada miyiga.
Maxay yihiin hababka ugu habboon ee shidaalka loogu keydin karo gaarigaaga? Dhaqaalaha shidaalka ee gaarigaaga waa waxyaabaha ugu muhiimsan.
Teknolojiyadda aad kula kulanto saaxiibbadaa
Haddii aad ka mid tahay dadka aan inta badan ogaan waxa ka dhacaya hareerahooda, waxaa jira barnaamijyo badan oo aad kula kulanto saaxiibbadaa.
Halyeeyga aad jeceshahay, sida ku xusan shakhsiyaddaada?
In ka badan hal jeer waxaad la yaabi doontaa keebaa superhero aad ugu jeceshahay. Waxaa jira nooc ka mid ah horoscope oo leh aasaas cilmiyeed, kaas oo isku xidha shakhsiyaadka.
Ma ogtahay guulaha xagaaga ee sanadkan 2017?
Bilahaan waxaan ku raaxeysanay hits xagaagii muusikada. Waxaa jiray wax walba oo ka yimid kuwa ka yimid xeebta diiran ee Caribbean-ka ...
Ma leedahay sifooyin aad ku noqon karto ganacsade?
Xaqiiqdii waligaa ma isweydiisay inaad runti leedahay sifooyinka ganacsade. Waxaad maqli doontaa inaad ficil samaynaysid iyo inaanad fulaynin.
Sidee loo doortaa caymiska baabuurta ee aadka loogu taliyay? Waxaa jira tilmaamo xiiso leh oo maskaxda lagu hayo. Waxaa lagugula talinayaa inaad isbarbar dhigto daboolida iyo qiimaha.
Ma rabtaa inaad abaabusho xaflad mawduuc leh?
Waqtigeena, abaabulka xaflad mawduuc waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan ee dhalashada, xafladaha bachelor-ka, xisbiyada shirkadaha, iwm.
Sida loo barto Ingiriisiga 10 daqiiqo maalintii internetka
Ku hadalka ama barashada Ingiriisigu mar dambe maahan raaxada. Xaqiiqdii ma jiro xirfadle iska indho tiri kara luqadda Shakespeare.
Sidee loo ogaadaa khamri wanaagsan? Qof kastaa wuu tababaran karaa sifiicankiisa si uu u helo "casaan" wanaagsan. Waxyaabo kale ayaa noqon doona aqoonsiga aromada.
Haddii aan joogno Madrid inta lagu jiro xagaaga, mid ka mid ah soo jeedimaha ugu fiican ayaa ah in la isku daro casho iyo is biirsaday. Wax walba isla aasaaska.
Noocyada gabdhaha waxaad la kulmi doontaa fasalo qoob ka ciyaarka
Markaad aadeyso fasalada qoob-ka-ciyaarka, waxaad ku dhaqaaqi kartaa hadafyo dhowr ah. Mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee lagula kulmo gabdhaha halkaas. Maxaad ka heli doontaa
Reggaeton ee 2017
Diskoo kasta ama hoolka qoob-ka-ciyaarka Reggaeton waa codka moodada. Joogitaankiisu wuxuu umuuqdaa inuusan rabin inuu seego xaflad kasta.
Soo noqoshada taxanaha ah ee ka dhigi doonta dib ugu noqoshada shaqada mid dulqaad badan
Kuwani waa qaar ka mid ah taxanaha ku soo noqonaya shaashadaha bilaha Sebtembar iyo Oktoobar si ay ugu soo laabashadayaga shaqada uga dhigto mid la qaadan karo.
Buugaagta hada ninka maanta
Buugaagta maanta waxay noo keenayaan tacabir, qarsoodi, milicsiga, iyo waxyaabo kaloo badan. Akhrisku waa mid ka mid ah raaxada shaqsiyadeed ee nolosha.
Nawaabiyaha gaariga wuxuu isu taagay inuu yahay qalab muhiim u ah safaradayada iyo safaradayada.
Tilmaamaha rinjiyeynta gaariga
Waxyaabaha deegaanka, ficilka taraafikada ama waxyaabo kale oo aan la sii saadaalin karin, waxay u keeni karaan jirka “dhaawacyo”. Waa lagama maarmaan in la rinjiyeeyo gaariga.
Ku raaxayso xawaaraha badda, adoo dareemaya neecaawda badda si buuxda wejigaaga, oo ay weheliyaan aromada badda ... had iyo jeer si taxaddar leh.
Qaar ka mid ah filimada ugu horreeya ee la daawado inta ka harsan xagaaga
Markaan dhex marno bartamaha xilliga xagaaga, inta badan filimada la filayo ee xagaaga 2017 ayaa durba tiyaatarada la saaray.
Kirada baabuurtu waxay noqoneysaa fikradda ugu fiican ee lagu booqdo meel kasta oo adduunka ah. Raac tilmaamahan si aad uga fogaato dhibaatooyinka
Markay wax waliba u socdaan digitiinis, waxyaabaha qaar ayaa is hortaagaya isbadal.
Talooyin ku saabsan keydinta miisaska makhaayadaha ee kooxaha
Marwalba ma sahlana in makhaayad wanaagsan loo helo kooxaha, dhacdooyinkayaga ama shirarkeenna. Tilmaamaha qaarkood ayaa kaa caawin doona hawsha.
Talooyin ku socdaal doon xagaaga
In kasta oo diyaaraddu si dhakhso leh u socoto, haddana safarka doonta xagaagan waxay ku siin doontaa khibrad gaar ah. Doomaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysatid qorraxda diirran iyo neecawda.
Talooyin ku socdaalka diyaaradda
Waqtigaan la joogo, khibrada safarka hawadu uma fiicna sida ay umuuqato. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira talooyin qaarkood oo la tixgelinayo.
Maxaad soo qaadaneysaa boorsadaada musqusha?
Mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah markaad qorsheyneyso safarkaaga waa inaad keento boorsadaada musqusha ee habboon. Maxay yihiin waxyaalaha aad u baahan doonto? Ka waran haddii wax la iloobo?
Codsiyada ugufiican ee dhageysiga muusikada
Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigeynaa liiska codsiyada si aad u dhageysato muusikada, si aad uga soo dejiso ama uga dhageysato muusikada taleefankaaga gacanta ama kaniiniga.
Qeybta dambe ee 'Kingsman' ma noqon doontaa filimkii ugu quruxda badnaa ee 2017?
Waxaan aragnaa sida dharka 'Kingsman: The Circle Golden' u noqon doono iyo haddii ay hagaajin doonto tii ka horreysay: 'Kingsman: Adeegga Sirta'.
In kasta oo farshaxanka iyo dhaqanku aysan aad u maaweelin, haddana waxaa jira hawlo dhaqameed oo isku xidhi kara, taasna wax badan ayey soo kordhin doontaa.
Talooyin ku saabsan barida ilmahaaga dabaasha
Markaad bilowdo inaad barato kanaga yar si uu u dabaasho, waa mid ka mid ah howlahaas oo sii xoojin kara xiriirka waalidka iyo ilmaha.
Qalabka safarka ee lagama maarmaanka u ah fasaxyadaada
Si aad si fiican ugu safarto, waxaad u baahan tahay qalab safar sida kuwan oo kale, kuwaas oo ilaaliya alaabtaada oo kuu oggolaanaya inaad wax badan ka hesho booskaaga.
. Mararka qaarkood, kordhinta mushaharku waxay ku timaaddaa sidii ay shirkaddu lafteedu u aqoonsan tahay, iyadoo ka warqabta hantida aadanaha ee ay ku leeyihiin safafkooda.
Gudaha Isbaanishka waxaa ku yaal xeebo qurux badan, dhowr xitaa xitaa in ka badan hal darajo oo leh "The Best in the World". Waa astaamo booqasho qasab ah.
Goormaan xusuusannaa qaboojiyaha? Badanaa waa guga hore, marka cimilada fiicani ay bilaabato inay timaado waxaan dareemaynaa kuleylka.
5 talooyin si guul leh loola kulmo wareysiga shaqada
Haddii laguu qorsheeyey wareysi shaqo, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad si cad u cadeyso ayaa ah inaad si buuxda isugu diyaariso wareysiga.
Sida looga badbaado maalinta koowaad jimicsiga
Haddii aad ka fikireyso inaad jimicsi ku sameyso qolka jimicsiga, waxaa laga yaabaa inaad shaki ama cabsi aad ka qabto waxa maalinta ugu horreysa halkaas jiri doonto.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tattoos
Tattoos-ka ayaa muddo dheer tan iyo markii laga joojiyay inuu ahaado mowduuc tab ah. Maalmahan dad aad iyo aad u tiro badan ayaa jidhkooda ku qurxiya noocyo kala duwan oo ah ujeeddooyin iyo sawirro.
Qof kastaa wuxuu leeyahay dookhiisa, laakiin haddii aan u eegno labada goobood si macquul ah, xeeb ama buur, laba nooc oo dalxiis. Waa kee ikhtiyaarka ugu fiican?
Huteelkee ayaa loo doortaa ciidaha?
Waxaa la cadeeyay in markay ciidaha yimaadaan, anaga oo Isbaanish ah aad iyo aad usii socdaalno. Xaqiiq ahaan, cudurdaar kasta wuxuu ansax ku yahay sameynta qorshooyinka.
Waa maxay kiniinka ay tahay inaad iibsato sida?
Markaad go'aansato inaad doorato kiniinka adiga ku xiisaynaya, waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo suuqa ah. Waxa xiga waa in la sameeyo xulasho sax ah.
Buugaagta ugu xiisaha badan xilligan
Marka laga hadlayo buugaagta, had iyo jeer wax cusub ayaa suuqa yaala. Waa kuwan qaar ka mid ah buugaagta xilligan ugu xiisaha badan.
Dhibaatooyinka xiriirka, sida looga gudbo
Waa inaan ka fikirnaa in dhibaatooyinka lamaanaha badanaa lama huraan. Su’aasha aasaasiga ah ee looga hortagayo kala tagista lamaanaha ayaa ah ogaanshaha sida loola macaamilo.
5 talooyin oo ku saabsan doorashada TV cusub
Si loo doorto telefishan cusub, waa inaad tixgelisaa dhinacyada qaarkood. Qalabka elektarooniga ah ee sidan oo kale ah ayaa badanaa loo doortaa cabirkooda.
Waxay ahayd waqti uun kahor Kaaliyaha Google, kaaliyaha codka ee cybernetic-ka weyn ee Mountain View, wuxuu lahaa nooc Isbaanish ah.
Sida loo doorto cadarka ugu fiican
Cadar wanaagsan way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay nooca maqaarka qofka xiran. Waxyaabaha ay ka midka yihiin pH oo leh aashitad sare ama ka hooseysa, ama xitaa bey'adda, way saameyn kartaa.
Habka ugu fiican ee lagu daawado filimada guriga
Daawashada tiyaatarka guriga maanta ayaa ah ikhtiyaar in, xaalado badan, ay yartahay ama aysan jirin wax laga maseero "sixirka" ku raaxeysiga filimka shineemo.
Xilliga la beddelayo moobiilka. Kee la dooranayaa?
Miyaad badalaysaa moobilkaaga oo maba taqaanid nooca aad dooranayso? Suuqa waxaa ku yaal noocyo aad u ballaadhan, dhammaan noocyada inji, noocyo, shaqooyin, iwm.
Sidee loo doortaa baaskiilkaaga ugu fiican?
Baaskiilka ugu fiican ayaa kuu oggolaanaya inaad kordhiso adkeysiga wadnahaaga, yareynta cadaadiska dhiigga iyo murqahaaga.
Baahida loo qabo ilaaliyeyaasha shaashadda moobiilka
Kama war qabno in qalabkani uu aad ugu nugul yahay xaaladaha iyo dhacdooyinka maalinlaha ah. Waa inaan isticmaalno ilaaliyeyaasha shaashadda.
Markaad ka fekereyso bedelida gawaarida, waxaa aad muhiim u ah inaad sameyso go'aanka saxda ah ee ku saabsan gaariga ku habboon, sida ku xusan dookhyadayada iyo baahidayada.
Waxay ku dhowdahay in lagu iibiyo suuqa, sida wax soo saarka kale. Kani waa Kitty Hawk Flyer, kii ugu horreeyay ...
Rag badan ayaa u janjeera inay diidaan cadeymaha: ragga sidoo kale way niyad jabaan, waxaan heysanaa waqti adag. Aqoonsiga dhibaatada waxay bilaabaysaa daaweynteeda.
Sida loo diyaariyo Cuba Libre kaamil ah
Xilliga xagaaga, cabitaannada cusboonaysiinta ayaa si aad iyo aad ah nooga codsanaya Waxaa ka mid ah Cuba Libre, cabitaan leh dhadhan iyo dhaqan badan.
Nooca gadhka sida ay tahay wejigaaga
Xulo nooca gadhka ee ku habboon wajigaaga. Soo ogow sida loo xiirto haddii aad leedahay weji wareegsan, oval ah, dheer, iyo noocyo kale oo weji oo guud ah.
Filimado casri iyo madow ah oo casri ah oo daawasho mudan
Filimadan casriga ah ee madow iyo caddaan ayaa kaa illoobi doona maqnaanshaha midabka si aad ugu milicsato sheekooyinkooda xiisaha leh.
Soo hel Hyundai Tucson cusub
Shirkada Kuuriyaanka ah ee Hyundai ayaa hada soo bandhigtay Hyundai Tucson cusub, oo ah nooc laga cusboonaysiiyay gudaha iyo dibada
Fiidiyowyada muusigga cusub ee aadan tabi karin
Waxaan kugula talineynaa afar fiidiyow oo muusig oo cusub oo aad tabi karto, gaar ahaan bilicdooda iyo dharkooda.
Waxaa jira maalmo kayar oo kayar inta guga uu imaanayo waana inaan la cusboonaysiinaa ...
Si aad uhesho xiirashada ugufiican uma baahnid inaad noqotid qof caqli badan, kaliya raac talaabooyin yar oo aan ku qeexnay qodobkaan.
Ogaanshaha sida loo doorto suunka la socda nooc kasta oo surwaal ah ayaa umuuqda mid fudud laakiin ma ahan.
Soo hel Hyundai i30 cusub
Si loogu dabaaldego sannad-guurada tobnaad ee Hyundai i30, shirkaddu waxay cusbooneysiisay moodelkan oo bixiya qalab ballaaran oo kala duwan
In kasta oo ay u muuqan karto wax fudud, jarista gadhka ayaa ah geedi socod qaadan kara wax ka badan inta caadiga ah haddii aanan si fiican u samayn.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo Gin Tonic, laakiin mid uun ayaa looga faa'iideysan karaa udgoonka iyo aqoonta uu cabitaankani ina siinayo.
Shaadhadhka qoorta ee Mandarin waxay ku soo noqdeen moodada dhawr sano ka hor waxayna noqdeen kuwo caan ah tan iyo soo jiidashada.
Si aad u ekaato dherer, uma baahnid inaad xirato kabo dherer ah, laakiin dharka ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad dheeraato.
Jilayaasha ugu quruxda badan filimada waxqabadka (oo aan ahayn James Bond)
James Bond waa asalka, laakiin isagu kaliya ma ahan dabeecad ficil jilicsan oo ficil ah. Halkan waxaan kuu sheegeynaa kuwa mudan in laga sawiro.
Hiwaayado casri ah xilliga qaboobaha
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad fiiriso taleefankaaga oo aad wax ka qabato, halkan waxaan kuugu tuuraynaa dhowr fikradood oo hiwaayad ah oo leh qaabab badan.
Alaab guri oo lagama maarmaan u ah xafiis guri. Maxaan ubaahanahay
Ma rabtaa inaad ka shaqeyso guriga oo aad yeelato xafiis kuu gaar ah? Tani waa waxa aad u baahan tahay si aad u sameysato xafiis kuu gaar ah.
Daawooyinka guriga oo kaa caawin doona inaad ka badbaado kirismaska
Si la yaab leh, xilliga Kirismaska ​​uma roona jidhkeenna. Daawooyinkan guriga waxay kaa caawinayaan inaad sifiican uga dareento dhibaatooyinka ugu caansan.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la kulanto 18ka moodel ee quruxda badan kuwaas oo markoodii ugu horreysay ka soo muuqan doona Bandhigga Fashion-ka ee Victoria ee Sannadkan ee Paris.
Sidee sifiican loogu labistaa Waxaan kaga jawaabeynaa su'aasha weligeed ah seddex qodob oo muhiim ah
Waxaan ku soo qaadaneynaa safar si aan u baranno sida loo labisto si wanaagsan: labbiska munaasabadda, xulashada cabbirka saxda ah iyo jarista iyo abuurista labis guud
Waxaan kuu sheegeynaa faa iidooyinka ku jira adeegsiga cajalad laba-geesood ah oo ku jirta hawlaheenna DIY, iyadoo na badbaadineysa dadaal, godad iyo wasakh
Filimooyinka naxdinta leh ee ugu qanacsan
Waxaan soo jeedineynaa seddex filim oo cabsi leh oo, marka lagu daro cabsi badan, sidoo kale ay ku qanacsan yihiin qanacsanaanta.
Moodooyinka Dutch-ka ee qabsaday Instagram
Moodooyinka Nederlandka ayaa ka sarreeya. Kuwani waa shanta ay tahay inaad raacdo barta Instagram si aan quudintaada looga tegin.
3 khiyaanooyin si loo helo armaajo hagaagsan oo habaysan
Haddii qolkaaga qolka yar uu ka yaryahay aag dagaal, ku celcelinta seddexdan khiyaano ayaa kaa caawin doonta inaad hesho qol habaysan oo hagaagsan.
Ana de Armas, oo kacsi leh isla markaana ka dhex iftiimaysa GQ-da Mareykanka
Atariishada Ana de Armas ayaa dareen ku abuureysa Hollywood. Wuxuu toogtaa qaybta dambe ee 'Blade Runner' oo GQ Mareykanku wuxuu ku dhacaa cagihiisa.
La shaqeynta Tommy Hilfiger iyo 'waa ragga' xilligan
Isku soo wada duuboo aruurinta London: Ragga, shirkadda Mareykanka ah ee Tommy Hilfiger waxay qabatay xaflad ay isugu timid mid aad u ...
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad maalin ku qaadato xeebta
Boorsada boorsada ah oo maalin lagu qaato xeebta way fududahay haddii aad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay. Halkan waxaan ku sharaxeynaa waxa ay tahay waxaana kugula talineynaa xulashooyinka ugu fiican.
Haddii aad raadineyso fasax gaar ah, waxaan ku siineynaa xulasho ka mid ah qaar ka mid ah tuulooyinka raaxada ugu wanaagsan ee Jasiiradaha Balearic ee kirada loo heli karo.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro xafiis yar oo laga bilaabo xoqida haddii aad rabto nabad dheeraad ah goobtaada shaqada ama aad kordhiso dareenka booska.
Labbiskii ugu fiicnaa ee Met Gala 2016
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa caanka ah ee labbiska ugu quruxda badnaa ay joogeen xafladdii 'Met Gala' ee 2016, taas oo sanadkan ku soo rogtay teknolojiyadda.
Raadi kursi ku habboon shakhsiyaddaada
Kursiga gacantu waa ninka labaad ee ugu fiican ninka. Had iyo jeer way nasataa oo way raaxaysataa. Halkan waxaan kugu hanuuninaynaa si aadan u fashilmin markii aad mid u dooranaysid qolkaaga fadhiga.
Raaxo Khayaali ah - Villas qeyb ahaan biyaha dul sabeynaya
Dubai waxay ka dhisi doontaa taxane villa dabaal ah biyaha ku xeeran El Mundo. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida xarumaheeda cajiibka ah ay noqon doonaan.
Qolalka Fendi, mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu nagaado Rome
Waxaan kuu sheegeynaa qolalka Fendi, oo ah mid ka mid ah meelaha ugu qurxoon ee lagu nagaado Rome, kaliya shan daqiiqo oo lug ah laga bilaabo Talaabooyinka Isbaanishka.
Rihanna, boqoradda Kaaribiyaanka iyo wax-is-dhaafsiga muuqaalkeedii ugu dambeeyay
Rihanna waxay umuuqataa mid dareen badan waligeed, taas oo ah in la yiraahdo, fiidiyaha loogu talagalay "Shaqo." Ha moogaanin hufnaanteeda iyo dhaqdhaqaaqyadeeda jannada.
Qabatinka filimada iyo cawaaqibkiisa
Ma waxaad u qabatimay galmada, galmada ama siigaysiga? Soo ogow cawaaqibkeeda iyo haddii aadan noolaan karin la'aantan raaxada nolosha.
Toddobaadka wuxuu doortaa toddobo Grammys sidoo kale wuxuu leeyahay qaab wanaagsan
Waxaan falanqeyneynaa qaabka loo yaqaan 'The Weeknd', oo ka mid ah fannaaniinta ugu guulaha badan maanta oo ka mid ah kuwa ugu labbiska wanaagsan.
Alaabada hoolka ee shaqeynaya iyo kuwa indhaha soo jiidanaya ee loogu talagalay dabaqyada yaryar
Haddii aad ku nooshahay aqal yar, halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa fikradaha alaabta guriga si hoolkaagu u noqdo mid shaqeynaya oo qurux badan.
Calaamadeeya Muruqyadaada - Sida Loo Labisto Si Aad U Eegto Adag
Haddii aad u maleyneyso in dharku uusan cadaalad ku samaynaynin, halkan waxaad ka heli doontaa tabaha dharka ugu fiican ee lagu calaamadiyo muruqyadaada oo sidaas awgeed waxaad umuuqataa mid xoogan.
Waxaan kuu sharraxeynaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka xiirashada korontada si lagaaga caawiyo inaad go'aan ka gaarto habka ugu wanaagsan ee xiirashada kiiskaaga.
Sida saxda ah ee loo kaydiyo kabaha xagaaga talaabo talaabo ah
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo keydiyo kabaha xagaaga si sanadka soo socda, marka aad banaanka u soo saarto, uu ku jiro xaalad qumman oo uusan waxyeelo u geysan kaydinta liidata.
Muuqaalka iyo Qaabka - Tilmaamaha Socodka Fiican
Waxaan ku siineynaa talo ku saabsan booska, tamarta iyo muujinta si aad u baran karto socodka wanaagsan iyo qaabab badan.
Dayrta ayaa halkan taal, oo iyada ayaan ku bilaabaynaa inaan ka fikirno funaanadaha, funaanadaha, jaakadaha…. oo maxaa diidaya ...
'Classics', dareenka labiska ee Wakiilka Provocateur
'Classics', kani waa cinwaanka ururinta ugu dambeysa ee Agent Provocateur, shirkad Ingiriis ah oo ku takhasustay dharka haweenka.
Siigaysiga: 10 sababood oo loo sameeyo
Faa'iidooyinka siigaysiga ragga. Ka tag tabta oo naftaada ku qanci in aysan wax ka khaldani jirin.
Hurdo, tan ugu soo noqnoqota uguna caansan
Haddii aad lumiso isku dheelitirkaaga riyada, waxaad u badan tahay inaad la kulanto xaalad qofka ka xoog badan oo aanad dareemin inaad awood u leedahay inaad kaligaa wax la qabato.
Waa maxay dhibcaha daciifka ah ee haweenku?
Soo ogow daciifnimada dumarka ee ugu weyn iyo sida loo isticmaalo si ay cagahaaga ugu dhalaalaan. Haddii aad rabto inaad sasabto haweeney, u fiirso meelahaas jirkeeda ka mid ah.
Sannadkii 2014, koox arday Dutch ah ayaa ka yaabisay qof walba intii lagu jiray World Solar Challenge, iyagoo soo bandhigay gaari cadceeda ku shaqeeya oo qaadi kara 4 qof 600 km oo isku xigta.
Waa maxay Macril iyo maxaa loo adeegsadaa iyo sidee loo adeegsadaa
Ma ogtahay waxa loo xidho aroosyadaas cabsida leh, baabtiisyada iyo wada noolaanshaha?
Waxaan hubnaa in sanadkaan aad heshay sacab mug leh oo casuumaadaha arooska ah (sidoo kale badanaa waxaa soo saaray ...
Immisa ayey ku kacaysaa tattoo-ku?
Waxaan ku tusinaynaa dhammaan qodobbada go'aamiya inta ay le'eg tahay qiimaha tatuuyuhu. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo haddii ay midab tahay ama madow iyo caddaan tahay, cabirka iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Baaskiiladan oo loogu magac daray Sondors Electric Bike, ayaa lagu iibiyaa qiyaastii $ 500, sida lagu sheegay olole ay dadweynuhu maalgeliyeen oo ku saabsan Indiegogo
Talooyin markaad qurxineyso miiska qadada asxaabta
Qof walba gurigiisa marti buu ku yeeshay. Waa xilli ku habboon in martida lala amakaago miis si fiican loo dhigay.
The "mun" ama ragga leh qaanso
In kasta oo ay tahay wax soo jiitamayay sannad ama in ka yar, - daqiiqaddaas sharafta leh ee ...
Snow Crawler, waa mooto baraf mustaqbal leh
Snow Crawler waa magaca mootadan barafka mustaqbalka. Waxaa sawiray naqshadeeyaha reer Polishka Michal Bonikowski, mootadan hal abuurnimada leh ayaa leh qol lagu xiro oo kaxeeya kaxeeyaheeda dhaxanta.
Maxay yihiin xeebaha ugu fiican Talyaaniga?
Talyaanigu waa waddan, marka lagu daro caan ku ahaanta quruxda weyn ee magaalooyinkeeda iyo taallooyinka waaweyn, leh xeebo badan oo qurux badan oo ay ku badan yihiin dalxiisayaasha adduunka oo dhan, gaar ahaan xagaaga.
Tilmaamaha sheekooyinka cusub ee cadarka 2014
Sannadkan waxaa jiray noocyo badan oo loo bixiyay si loogu abuuro cadar ragga qayb ahaan ...
Tattoos-ka ayaa ku wareegsanaa jirkeena muddo dheer ka hor intaadan fikirin. Weli waxaa harsan oo tilmaamaya in ...
Naqshadeynta shirkad Hindi ah, baaskiilkan ayaa leh hub sir ah oo aad u casri ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku qaadato meel kasta.
Cicret Bracelet, gacanta ayaa noqota shaashad taabasho ah
Jumlada Cicret waa shey gebi ahaanba tiknoolajiyad sare leh oo kuu ogolaanaya inaad ku xirnaato dhowr ilbiriqsi sidii ay tahay casriga casriga ah.
10 arimood nin kastaa waa inuu ka ogaadaa naqshada gudaha
Waxaa jira guluf weyn oo u dhexeeya haysashada gurigaaga arday jaamacadeed (Erasmus kiiska ugu xun) iyo ...
Kuwo badan ayaa caan ku ah samafalayaal, kuwa kalena kama warqabin doorkooda ugu deeqsinimada iyo naf-hurnimada. Qaar ka mid ah tixraacyada aan jecel nahay ee ku saabsan Fasalka ...
Haddii aad jeceshahay taas markaad guriga soo gasho, muusiggu keligiis buu bilaabmaa, si uu kuugu soo dhoweeyo fannaaniinta aad ugu jeceshahay, Prizm ayaa sameeyay.
Kristof Retezar ayaa hada keenay hal-abuurnimo weyn. Qalabkan oo si gaar ah loo soo saaray si loogu xidho baaskiil ayaa u oggolaanaya inuu qoyaanka hawadu u beddelo biyo la cabbo.
Waan ka daalay markaan arko gaboodfallada dhabta ah ee daadadka ka haya qolkaaga, waxaan go'aansaday inaan ku soo koobo 5 qodob oo muhiim ah waxa ay tahay inaad ...
Lovers of harqaanka epicurean-ka ayaa nasiib badan. Waana, in Canali, ay daah-furtay dukaankeedii ugu horreeyay ee caan ka ah dalkeenna.
Rumayso ama ha rumaysan ... 90-yadii way soo noqdeen
Hadda oo Twin Peaks uu soo laabtay, way ka cadahay sidii hore in 90-meeyadii ay la kulmayaan soo nooleyn buuxda….
Waxaad u muuqataa mid qurux badan oo funaanad ...
Roobku ma joogsanayo, qabowga ayaa imanaya iyo… sida quruxda badan ee aad u wada leedihiin funaanad. Ma jiro dhidid, jaakad la'aan, maya ...
Mar dhow ma jiri doonaan wax ka hadla wax aan ka ahayn teknoolojiyada "la gashado". Laakiin maxay cadaabta yihiin? Waxay u egyihiin sidii kaabis ...
Gaadhigan ayaa ku qalabaysan nidaam cusub oo Nanoflowcell propulsion system ah, kaas oo ku shaqeeya biyaha cusbada oo ay soo saartay shirkadda isku magac wada ah.
Dayrta ayaa garaacda albaabadeena waana waqtigii la heli lahaa jaakad wanaagsan xilliga. Kuwa badan baa jira…
Kadib in ka badan 15 sano oo guul ah, Hugo Boss wuxuu ku guuleystay inuu qeexo ninka maanta isagoo ku dhawaaqay inuu ...
Ka mid ah isbeddellada imanaya ama tagaya, kordhinta shaatiyadaha ayaa ka mid ah kuwa ugu ...
Goobaha tima jarayaasha ee aadan tabi karin
Gadhka ayaa ka mood badan sidii hore weligiisna daryeelkiisu wuu badan yahay waana kala duwan yahay. Laakiin, wax ka fiican ma jiraan ...